XOG:- Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo si qarsoodi ah xafiiskiisa xil uga magacaabay nin ay ehel yihiin (CADEYN) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo si qarsoodi ah xafiiskiisa xil uga magacaabay nin ay ehel yihiin (CADEYN)
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno saraakiil ku sugan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke uu dhawaan nin ay isku heyb yihiin si qarsoodi ah xil uga magacaabay xafiiskiisa.
Ninkaan oo lagu magacaabo Saacid ayaa sida la sheegay loo magacaabay xilka wasiiru dowlaha arrimaha Bii’ada ee xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana xilkaan hore u heyn jiray Allaha u naxariistee Marxuum Burci Maxamed Xamza.
Ma jirin wax wareegto ah uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid kasoo saaray xilkaan uu u magacaabay ninkaan lagu magacaabo Saacid, balse wuxuu arrinta oo dhan ka dhigay mid qarsoodi ah.
Saacid ayaa maalintii xilka loo dhaarinayay waxaa lala dhaariyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Xasan Xuseen Muungaab oo xilligaasi isna xilkii dhawaan loo magacaabay loo dhaarinayay.
Dhinaca kale, nin la dhashay Allaha u naxariistee Burci Maxamed Xamza oo jagadaan loosoo bandhigay ayaa ka cudur-daartay, waxayna taasi keentay inuu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid arrinkaasi ka faa’ideysto.
Si kastaba ha ahaatee, madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ayaa xilliyada kala guurka ah waxay inta badan ku takri falaan awoodooda, iyagoo kadibne xilal kala duwan u magacaaba dad ay ehel iyo saaxiibo yihiin, si ay uga faa’iideystaan inta yar ee uga harsan waqtigooda.